के हो सिजोफ्रेनिया ? के हुन्छन् लक्षण र उपचार पद्दति ? – Public Health Concern(PHC)
in जनस्वास्थ्य जानकारी, जनस्वास्थ्य बिशेष, नसर्ने रोगहरु, स्वास्थ्य समस्या
schizophrenia and its sign and symptoms with treatment
सिजोफ्रेनिया गम्भीर प्रकृतिको मानसिक रोग हो । यो रोग लागिसकेपछि बिरामीले वास्तविकतामा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूमा आफ्नै छुट्टै अनुभूति हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूले असामान्य व्यवहार देखाउन थाल्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर कुल जनसंख्याको करिब एक प्रतिशत मानिस सिजोफ्रेनियाबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि मानसिक रोगीमध्येमा अधिकांशमा सिजोफ्रेनिया भएको पाइन्छ ।
बुढेसकालमा डिमेन्सिया ! कस्ता देखिन्छ लक्षण र कसरी गर्ने उपचार ?
सिजोफ्रेनिया भएपछि शंका र भ्रम उत्पन्न हुने गर्छ । नभएका आवाज सुन्ने, दृश्य देख्ने, हुँदै–नभएका कुरामा विश्वास गर्ने, विचार र व्यवहारमा सन्तुलन ल्याउन नसक्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । जसले गर्दा उनीहरूमा कसैले आफूलाई पछ्याइरहेको, मार्ने योजना बनाइरहेको, नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको, आफू शक्तिशाली अर्थात् भगवान् हुँ भन्ने अनुभूति हुन्छ । त्यस्तै, पेटमा सर्प वा अन्य जनावर तथा खानेकुरामा विष छ, भन्नेजस्ता भ्रम पैदा हुन्छन् ।
कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउँदा अनुहार भावविहीन हुने गर्छ । सुरुवाती समयमा तनावमा रहने तथा सामाजिक चरित्र गुमाउँदै जाने हुन्छ । बिस्तारै कुनै कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित हुन नसक्ने र निणर्य लिन सक्ने क्षमतामा कमी आउँदै जान्छ । असामान्य व्यवहार देखाउने भएकाले उनीहरू समाजमा फिट हुन सक्दैनन् । शंकालु हुँदा दुर्घटना निम्तिने डर हुन्छ ।
सामान्यतया, वंशाणु, जैविक, वातावरणीय, मनोवैज्ञानिकजस्ता कारणले मानसिक रोग लाग्ने गर्छन् । त्यसमा पनि वातारणीय प्रभाव, व्यक्तिको मनोविज्ञान र वंशाणुगत गुणले मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
अधिकांश मानिसमा वंशाणुगत गुणका कारण सिजोफ्रेनिया हुने गर्छ । यदि, आमाबुबामा सिजोफ्रेनिया छ भने बच्चामा पनि हुने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
पारिवारिक वातावरण, व्यक्तित्व र स्वभावले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिहेको हुन्छ । मस्तिष्कमा भएको रासायनिक असन्तुलनका कारण पनि कतिपय अवस्थामा सिजोफ्रेनिया हुने गर्छ ।
नेपालमा मानसिक रोगलाई सजिलै नस्विकार्ने सोचका कारणसमेत अधिंकाश मानिस पीडित हुने गर्छन् ।
कुनै भाइरल संक्रमण वा प्रतिरोधी क्षमतामा कमी आएमा पनि मस्तिष्कमा असर पर्छ । त्यस्तै, लागुपदार्थ सेवन तथा औषधिको दुरुपयोगका कारणसमेत सिजोफ्रेनिया हुने गर्छ ।
सुरुवाती चरणमै उपचार गर्न सकेमा सिजोफ्रेनिया पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ ।
सिजोफ्रेनियाको उपचारमा औषधिबाट गरिन्छ । चिकित्सकको निगरानीमा कडा खालको औषधि प्रयोगमा ल्याइन्छ । औषधि सँगसँंगै बिरामीलाई उचित काउन्सिलिङ दिन आवश्यक छ । साथै, साइकोथेरापीबाट पनि उपचार सम्भव छ ।
Tags: Janaswaasthya SarokarMental HealthMental Health ProblemsNCDs NepalPublic Health ConcernSchizophreniaschizophrenia and its sign and symptoms with treatment
स्वास्थ्य समायोजन अपडेट :प्रदेश अन्तर्गत समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण(सम्पुर्ण प्रदेशको लिस्ट सहित)
मानसिक समस्याका कारण हरेक ४० सेकेण्डमा एक जनाको आत्महत्या : डब्लुएचओ
सरकार द्वारा ३४ जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी लाई आपतकालीन हवाई उद्दार सेवा ! बिशेष जानकारी समेटिएको !